Home Wararka Adeegsiga Dembiileyaasha waa Caado NN lagu bartay -min Shabaab- ilaa Kuwa Haweenka...
Adeegsiga Dembiileyaasha waa Caado NN lagu bartay -min Shabaab- ilaa Kuwa Haweenka Dhibaateeya.
Waa kuma Cabdi Xersi? Dad badan oo reer Waqooyiga Amerika ah waa yaqannaan Cabdi Xersi waana shakhsi ka mid ah dambiilayaasha aan waxba dhaammaani kuwa dowladda Farmajo iyo Fahad ku adeegtaan dadka Somaliyeed dhiigooda gacmaha ku sita, sheegtana inay shabaab ka soo goosteen.
Waa caado dowladda NN ay leedahay inay isticmaasho rag dambiilayaal ah si ay u isticmaasho iyagoo dulleysan oo aan waxba ka diidi karin. Cabdi Xersi waa beenaale sheegta inuu yahay sheekh, hasa yeeshee waa faasaq horay loo xayuubiyey ruqsad uu haaweenka xanuunsan ku gacmagacmeysan jiray oo ahayd Respiratory clinical job, sida aad ku arki doonto muqaalkan hoose.
Cabdi Xirsi waxaa ka mid yahay CBB waxaanu mar waliba marin habaabin ku sameeyaa shacbiga Somaliyeed oo isku dayo inuu u amaano kuwa dhibaatada ku haya. Waxaa uu leeyahay bar Bulshadeed lagu faafiyo beenaha aan sal iyo raad toona lahayn. Sida sare ka muuqata waxaa uu RW Rooble iyo MW Deni ku eedeynayaa guusha Ahlusunna oo ka timid dayacaad uu dowlad Goboleedkii soo dayacay mid isaga ka mid ah CBB Farmajo ku xeran waa Axmed Qoorqoor.
Waxaa dhinaca kale la yaab leh Dr. Cabduraxmaan Beyle oo ay dad badani aqoon ku tuhmayeen inuu dembilahaan la wadaago bar bulsho, isagoo weliba eedeyn u soo jeedinaya dadkii ka xumaaday markii uu laba afleeyey oo uu maalinna yiri Somaliya hogaaminta NN darteed cirka ayey mareysaa mana soo noqon doonto, isla maalintii ku xigtayna isagoon soo fooldhaqan la soo istaagay Sagxadda ayaanu mareynaa. Waa yaabe waayeelkan waayo soo joogay wixii ku quraacday ma oga miyaa marka Qadada la joogo? Khamiistii waan duuleynaa oo dhaqaalaha oo aan NN uga masuul ahay cirka ayuu marayaa Jimcihiinna Sagxadda ayaan fadhinaa shilin mayaallo. Tolow ma habeekii Jimacaha soo galayey ayaa gawaarida waaweyn ee xaamulka qaadaa Bangiga lagu faaruqiyey po sidaas ayuu Jimcihii eber u noqday? Misa khamiistii waxay ahayd beentii afarta sano soo socotay maalintii la soo afjarayey?
Beyle ha ogaado laguma farxin in dalku meelkasta, Dhaqaalaha, amaanka, Sharafta iyo hogaaminta uu sagxadda yaallo ee waxaa lagu farxay in markii u dambeysan uu Beyli waallidiisa cadeystay iyo in dhagihiisa iyo afkiisu aysan ismaqleyn wasiirka Maaliyadda noo hayey 4 sano iyo googo,.
Runtii Beyle, Cabdi Xersi, Zakariye Ismaciil, Yasiin , Farey, Kulane Xasan Cali Kheyre, Farmajo iyo Fahad dalkaan waa la degeen, waayo waa mid gacantiisa wax ku dila Sida Zakariye, Farey iyo Kulane, mid afkiisa wax ku dila sida Kheyre iyo Beyle, mida bartiisa Bulsho wax ku dila sida Xersi iyo kuwa kaloo badan, mid qalinkiisa wax ku dila sida Amin Caamir, mida amarkiisa wax ku dila sida Fahad iyo mid hogaamintiisa wax dila sida Farmajo iyo koox badan oo iyaga cuqubada la qeybsan doona sida hadda Qoorqoor haysata oo ugu kaalmeeyey dhibaateynta dalka.